Sida looga saaro qaabka sugitaanka TV-ga ulator Emulator.online ▷ 🥇
Kuwa had iyo jeer TV-yada ku daawada guriga waxay xaqiiqdii ogaadeen in mudo cayiman kadib bilaa firfircooni, TV-ga si otomaatig ah u damiya una galayo qaab heegan ah, sidii aad ku riixnay badhanka casaanka ee haanta fog. Markay taasi dhacdo waa inaan la naxin oo loo maleynin inuu telefishanka jabay: waa dhaqan caadi ah, oo ay ugu talagaleen soosaarayaasha TV-ga inay keydiyaan tamarta marka TV-ga la daayo iyadoo aan cidina wax ka beddeleynin kanaallada ama aan wax hawl ah oo kale qaadayn muddo dheer (badanaa 2 saacadood ka dib).
Haddii aanaan jeclayn dhaqankan ama aan doonayno inaan daawano telefishanka oo aan joogsi lahayn xitaa in ka badan 3 saacadood, tusahan waxaan ku tusi doonaa sida looga saaro TV-ga qaabka heeganka oo ah noocyada TV-yada waaweyn, si aad isla markiiba u xakameyn karto habka tooska ah ee heeganka xaaladaha qaarkood ama xaaladaha qaarkood ee TV-ga had iyo jeer looga baahan yahay (tusaale ahaan, TV-ga dukaan ku jira, TV TV shirkad ilaaliya). qof weyn ama cunug)
Sidee TV-ga looga joojiyaa habka heeganka
Sida ku xusan horudhaca, muuqaalka gawaarida gawaarida waxaa lagu bixiyaa dhamaan TV-yada casriga ah iyo TV-yada casriga ah si ay u fududaato keydinta awooda marka aad ku sii jirto muddo dheer oo aan la macaamil lahayn. Si kastaba ha noqotee, soo saare kasta wuxuu bixiyaa suurtogalnimada in lagu hagaajiyo shaqadan (kordhinta waqtiga sugitaanka) iyo waliba by gebi ahaanba dami, si aad ugu raaxeysan karto TV aan xad lahayn. Xaaladda dambe, si kastaba ha noqotee, xusuusnow inaad si xilliyo leh u demiso kontoroolka fog, si aad u keydiso tamar una kordhiso nolosha qalabka.
Ka saar LG TV qaabka sugitaanka
Haddii aan haysano LG smart TV waxaan ka saari karnaa habka tooska ah ee heeganka adiga oo riixaya badhanka qalabka ee ku yaal kontoroolka fog, waxay ku qaadataa liiska Dejinta oo dhan, xulo liiska General ugu dambayntiina ku cadaadi curiye Saacad.
Daaqada cusub ee fureysa, waxaan shaqeyneynaa sheyga Afasax 2 saacadood kadib adiga oo gujinaya isla markaana, haddii aan u dejinay saacad xirida oo ka duwan, waxaan ku hubinaynaa liiska Off saacad, Hubinta in shayga loo dhigay Jooji. Haddii kale, waxaan sidoo kale xaqiijin karnaa codka Habka Eco (ku jira liiska) General) haddii codku firfircoon yahay Xiritaanka otomatiga, markaa waad damin kartaa.
Samsung TV ka saar heeganka
Telefishinada Samsung-ka ayaa aad loo jecel yahay, isticmaaleyaal badana hubaal waxay ogaan doonaan ugu yaraan hal jeer habka heeganka otomaatiga ah ee ficilka ah. Haddii aad ka mid tahay kuwa doonaya in la furo, waxaan ku sii wadi karnaa adigoo riixaya badhanka menu ee hagida fog, oo nagu hogaamineysa wadada Guud -> Maareynta Nidaamka -> Waqti -> Waqtiga Hurdada iyo hubinta haddii shayga Qalabka uu naafo yahay (waa in loo dejiyaa 2 saacadood markii ugu horreysa: aan u beddelno dejimaha DAN).
Haddii habka kor ku xusan uusan shaqeynin, waxaan u baahanahay inaan hubino haddii xakameynta heeganka laga heli karo goobaha keydinta awoodda. Si loo sii wado waxaan fureynaa menuaan qaadanno Xalka cagaaran ama Guud -> Xalka deegaanka oo hubi haddii codku firfircoon yahay Xiritaanka otomatiga, si ay si joogto ah u naafo u noqoto.
Ka dheji TV-ga Sony qaabka aan sugnayn
Sony TV-yada waxay lahaan karaan nidaamka hawlgalka lahaanshaha iyo kan cusub ee TV-ga Android: labadaba nidaamyadu waa kuwo tamarta kaydsada isla markaana si otomaatig ah waxay ugu socdaan heeganka ka dib wakhti cayiman oo aan wax soo galin ah. Si aad u joojiso heeganka Sony TV-yada oo aan lahayn TV-ga Android, kaliya riix batoonka Guriga / Menu ee ku yaal kontoroolka fog, aan wadada qaadno Dejinta Nidaamka -> Eco oo hubi haddii heeganka TV-ga ee bilaa camalka ahi firfircoon yahay, markaa waan awoodi karnaa
Haddii aan leenahay telefishanka Sony oo wata TV-ga Android, waxaan riixnaa badhanka Casaaan qaadno wadada Dejinta -> Tamarta -> Eco oo dami qaabka sugitaanka. Haddii ay shaqeyn weydo ama shaashadda mar kale damiso waqti cayiman kadib waxaan sidoo kale hubin doonnaa qaabeynta Riyood, oo ah muuqaal Android ah oo soo bandhigaya shaashad shaashad haddii ay dhacdo dhaqdhaqaaq la'aan. Inaan sii wadno, aan qaadno wadada Dejinta -> TV -> Riyo maalmeedka oo hubi in ku xigta curiyaha Markaad ku jirto habka hurdada codku waa joogaa Mayo.
Qaar ka mid ah TV-yada casriga ah ee casriga ah ee 'Sony' ayaa sidoo kale leh dareemayaal joogitaan, kaas oo ogaada jiritaanka dadka hortiisa TV-ga, haddii ay dhacdo hubin diidmo ah, wuxuu si otomaatig ah TV-ga u geliyaa xaalad heegan ah. Muuqaalkan dhul-gariirku wali wuu curyaami karaa adiga oo riixaya badhanka Menu-ka, adiga oo nala kaxeynaya Dejinta -> Nidaamyada Nidaamka -> Eco -> Jiritaanka Sensor oo sheyga u dhig DAN.
Ka saar Philips TV heeganka
Philips TVs sidoo kale waxaa ku jiri kara nidaam hawleed lahaansho ama Android TV, markaa waa inaan si kale u sii wadnaa. Kuwa haysta TV-ga Philips oo aan lahayn TV-ga loo yaqaan 'Android TV', waa suurtogal in la joojiyo habka sugitaanka adigoo riixaya badhanka Tusmada / Hoyga kontoroolka fog, furitaanka menu-ka Takhasusyada O General, kor u qaadida Saacad ugu dambayntiina albaabka laga furayo Dami, halkaas oo aan ku qasbanaan doonno inaan u qaabeyno shaqada DAN.
Haddii Philips TV uu cusub yahay, waxaan ka saari karnaa habka sugitaanka adoo riixaya badhanka menu, oo nagu hogaaminaya wadada Dejinta -> Dejinta Eco -> Waqtiga Hurdada oo saacad u samee 0 (eber).
Ka saar TV-ga Panasonic-ka qaabka sugitaanka
Haddii aan leenahay TV-ga Panasonic-ka ah oo damiya muddo cayiman kadib, waan ku hagaajin karnaa adigoo riixaya badhanka Saacad (waxay ku jirtaa moodallo badan oo ah kontoroolada fog ee Panasonic) iyo, liiska cusub ee furi doona, waxa kaliya ee aan sameyno ayaa ah in la joojiyo sheyga Qabashada otomaatiga ah.
Miyaanay jirin badhan saacad ku shaqeeya barnaamijkeena fog ee Panasonic TV? Xaaladdan oo kale waxaan ka saari karnaa heeganka kadib nidaamka caadiga ah, oo ka kooban riixitaanka badhanka menu kontoroolka fog, fur menu-gaaga saacadda oo u dhig Auto Power Off DAN ama isaga 0 (eber)
Haddii qaabka heeganka ee TV-ga uu na dhibayo inta aan daawaneyno filim dheer oo dheer ama inta lagu guda jiro kal-fadhiga aadka u daran (taasi waa, marka aan daawanno dhacdooyin badan oo taxane TV ah si isdaba-joog ah), curyaaminta habka heeganka ayaa noqon kara xal wax ku ool ah. markaa uma baahnid inaad taabatid koontaroolka fog. ugu yaraan saacaddii hal mar si telefishanku "u fahmo" inaan joogno oo aan wax u daawaneyno. Thanks to hagahan waan awoodnaa dami heegan telefishanka noocyada waaweyn, laakiin tillaabooyinka aan ku tusnay waxaa lagu ciyaari karaa TV kasta oo casri ah, waxaan kaliya u baahnaan doonnaa inaan qaadanno aaladda kontoroolka fog, galno goobaha oo hubino walxo kasta oo laxiriira xirida otomaatiga ah ee telefishanka: Heeganka, keydinta tamarta, Eco, Eco Mode ama Timer
Nidaamyo badan oo heeganka ah ayaa is beddelaya iyadoo ku xiran nidaamka hawlgalka lagu rakibay; Si isla markiiba loo fahmo nidaamka aan horay u hayno iyo sida loo socdo, waxaan kugula talineynaa inaad sidoo kale aqriso hagayaasheena Sidee loo ogaadaa inuu yahay TV-ga casriga ah mi TV-ga Smart-ka ugu fiican Samsung, Sony iyo LG App Nidaamka.
Dhibaato miyaan ku qabnaa habka heeganka ah ama kumbiyuutarka ayaan xiraynaa? Xaaladdan oo kale, waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad qoto dheer ka dhigto doodda adoo akhrinaya maqaalkeenna. Hakinta iyo hibeynta kumbuyuutarka: kala duwanaanshaha iyo adeegsiga.